Dhugaa Jiru Maaltu Beeka?
Waraanni Itiyoophiyaa torban darbe daangaa Ertiraa seenuun maadheelee kan waraanaati ittiin jedhe irratti haleellaa eega gaggeesse as muddamsi daangaa biyyoota lameenii irra jiru dabalaa jira.
Dubbi himaan mootummaa Itiyoophiyaa Shimellis Kemaal turiistoota Awuroopaa Affaar keessatti garee riphxee-looltootaaan baatii lama dura ajjefaman haaloo ba’uuf tarkaanfii kana fudhanne jedhan.
Ertraan immo weerera of tulummaa kan lafa Ertraa Itiyoophiyaan seeraan ala qabatte jirtu irraa yaada addunyaa maqsuuf karoorfame ittiin jette jirti. Haaloo ba’uuf duula waraanaa keessa hin seenus jettee jirti.
Dubbi himaan ministrii dantaa alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftii Ertiraan Itiyoophiyaa irratti duula harka biraan gaggeesitu aguguu yaalti, jechuun himatan.
Xinxaltonni akka jedhanti gareen hidhattootaa Affaar ARDUF jedhamu naanoo Erta Alle jedhamuutti darbee darbee haleellaa geesiisa malee beekamaa miti. Itiyoophiyaan akka jettuutti ARDUF leenjii fi deggersa maallaqaa kan argatu Ertiraa irraa ti. Ertiraan immo Itiyoophiyaan weerara gaggees situuf sababii kana himatti jetti.
Gareen ARDUF baatilee darban lamaaf dhaamsa I-meelii dabarsaa tureen baatii AMajji keessa humnootii Itiyoophiyaa waliin wal waraansa gaggeessaniin tuuristonni Awurooppaa shanaan ajjefaman.
Xiinxalaa waa’ee biyyoota gaanfa Afrikaa fi dur Itiyoophiyaatti Ambaasaaddara Amerikaa kan turan David Shinn akka jedhanitti, ARDUF dhugumaa balaa kana ha geesisu ykn yokaan akkanumaan haleellaa sanaaf sababaa haa taasisamu beekuun rakkisaa dha jedhan.
Kanaaf mirkaniin tokko hin jiru. waanuma Itiyoophiyaan jette fudhachuu irraa dubbatama. Dhugaa ta’uus mala. Sababiin isaa gama kaaniin Itiyoophiyaan gareelee Ertiraa kanneen Mootummaa Asmaraa kuffisuuf sosso’an gargaaraa akka jirtu galmeen agarsisu ni jira jedhan.
Mummichi ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zenaawwii baatii Ebla darbe paarlaamaa isaaniif haasaa dhagesisaniin mootummaan isaanii gareelee mootummaa Isaayaas Afewarqii kuffisuuf qabsaa’an kan deggeru ta’uu beesisanii turan kan jedhan David Shinn, kanas Ertiraan yeroo walgahiin Gamtaa Afrikaa Finfinnee keeessatti gaggeefamuuf turetti haleellaa bombii jabaa geesisuuf turte jechuun Itiyoophiyaan eega himattee booda jedhan.
Ertiraan garuu himannaa kana jabeessite haaluun ni yaadatama.Gabaasaa Guutuu MP3 tuquun dhaggefadhaa